Koox fallaago ah oo 160 Ruux ku dishay Itoobiya | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Koox fallaago ah oo 160 Ruux ku dishay Itoobiya
Koox fallaago ah oo 160 Ruux ku dishay Itoobiya
written by warsan radio 08/02/2022
Maamulka gobolka Oromada ee dalka Itoobiya ayaa ku eedeeyay koox fallaago ah inay dileen in ka badan 160 qof oo rayid ah islamarkaana 87 meyd ay ku aaseen xabaal wadareedyo ku yaalla galbeedka gobolka.
Ciidamada Xoraynta Oromada (OLA) oo inta badan ay dawladu ku eedayso inay ka dambeeyaan dilalka loo geysanayo dadka laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka ayaan ka jawaabin eedaymahan u dambeeyay.
Ururka ayaa horey u beeniyay inay weerareen dad rayid ah. Sida uu sheegay guddomiyaha deegaanka galbeedka Oromia, Ibsa Basha, ayaa sheegay in meydadka laga helay degmada Gidami kadib markii ciidamada dowladdu ay jabhadda ka saareen deegaannadii ay maamulayeen.
OLA, oo sanadkii hore isbahaysi la samaysatay ciidamada Tigreega ee dagaalka kula jira maamulka Raysal wasaare Abiy Axmed, ayaa ka hawlgala galbeedka iyo koonfurta Gooblka Oromiiya halkaas oo dhawaanahan dhacayeen isku hor imaadyo dhexmarayay ciidamada dawladda iyo fallaagada.
Weerarada ay dowladdu ku qaadday kooxdan ayaa lagu soo waramayaa inay ka qeyb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Warbixinta dilka lagu eedeeyay kooxda ayaa dhalisay caro dadweyne oo dhanka baraha bulshada ah.
Koox fallaago ah oo 160 Ruux ku dishay Itoobiya was last modified: February 8th, 2022 by warsan radio
Burbur looga shakisanyahay diyaarad lagu la’yahay Indonesia oo la arkay
RW Rooble oo ka hadlay Xildhibaannada Maanta lagu doortay Muqdisho
Soomaaliya ayaa Maanta la soo gaarsiiyay Deeq Daawo ah
Qaramada midoobay iyo midowga Yurub oo war kasoo saartay hadalkii gudoomiye Xaliimo Yareey.
Wasiir Goodax oo kulan la qaatay qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed
Ciidamada Gorgor oo degaano kala wareegay Al-Shabaab